Izityalo ziyimveliso ebalulekileyo kumzimba wethu, wonke umntu uyazi oku. Izifundo ezahlukeneyo ziye zaqinisekisa ukuba ukutya akusikhuthazi nje kuphela umzimba kunye nempilo ngokubanzi, kodwa kwanokunceda ukujamelana nezifo ezahlukeneyo. Namhlanje siza kuthetha ngeendawo ezinobungozi zokutya: i-hare, ii-oats, i-corn, i-millet, ilayisi, i-buckwheat.
Abantu beebhaley baye bahlakulela ukususela kwixesha elidlulileyo, kwaze kwaba yiphilisi yasendulo ezaziyo malunga nezixhobo zayo ezincedo. Ibhali iqokelelwe inani elikhulu lezinto eziphilayo kunye namavithamini eziyimfuneko kumzimba womntu. Umxholo wee-carbohydrate ezinomsebenzi kulo mgca ufikelela kuma-65%, kwaye ngoko isitya se-barley ipilitari ixesha elide liya kuhlawula umzimba nge vivacity. Lo ngumzekelo omhle wesidlo sakusasa.
Ibhali iqulethe iprotheni eninzi, ebanjwe ngumzimba womntu ngokugqithiseleyo. I-Fiber, ekwaqulethwe kule khoyiyali kwinani elibalulekileyo, liyimfuneko nje kumathumbu nesisu. Inomphumo onenzuzo kwindlela yokutya, isusa iimveliso zokubola ezivela emzimbeni.
I-hareyi inomlinganiselo omangalisayo wamavithamini kunye neemaminerali. Le mifuno iqukethe iivithamini A, E, PP, D, isiqhelo esipheleleyo se-vithamini B. Ebhali, malunga ne-phosphorus, i-potassium, i-calcium, i-manganese, i-zinc, isinyithi. Kwakhona ekubunjweni kwesi saziso kukhona i-iodine, i-chromium, ithusi, i-silicon, i-magnesium, i-molybdenum, i-nickel, i-bromine, i-strontium, i-cobalt, isulfure, i-selenium, i-fluor kunye nezinye izinto. I-hareyi - enye yezona zityalo eziqhelanisiweyo ze-vitamin-mineral complexes, ezithinteka kakuhle umzimba womntu. Ibhali iyakwazi ukususa i-toxins emzimbeni. Izidlo ezivela kulolu luthando luncedo lokujamelana nokunyamezela. I-barley icetyiswa kwisifo sikashukela, i-arthritis, i-prostatitis, i-hemorrhoids, isifo sesibindi, isifo, i-urinary ne-gallbladder. I-barley kvass inceda ukubuyisela amandla emva kokuzivocavoca, kuphuculwe ukugaya kunye ne-metabolism. I-Kissel ye-barley ehluma iyakunceda ukulwa nesifo sikashukela, izilonda zesisu kunye nezilonda zomzimba. I-hareyi ikwaziwa nangokuxhamla komxholo we-lysine kunye ne-hordecin-yendalo ye-antibacterial and anti-virus. I-barley infusions kunye ne-decoctions zinceda ukuqeda izifo ezifayo zesikhumba, ukuncedisa izifo zendlela yokuphefumula, inkqubo yokutya. Ngokwe siseko sebhali, ezinye iziyobisi kunye ne-bactericidal drugs ziveliswa. I-barley inceda ukugcina impilo kunye nokusebenza ngokuqhelekileyo komzimba ngokupheleleyo, kuyisisombululo sokukhusela izifo ezininzi.
I-Oats nayo yindawo ekhethekileyo yokutya. Iqukethe iproteinyini engama-20%, ibe kwindawo yesibini emva kwe-buckwheat, i-50-60% ye-carbohydrate, isixa esikhulu se-fiber e-soluble (beta-glucan) enokubaluleka ngokukhethekileyo ukulungiswa komfanekiso. Le ngqolowa icebile kwiivithamini B, E, A, K, kwaye iqulethe umxholo omkhulu we-iodine, i-fluorine, i-phosphorus, isulfure, i-manganese, i-magnesium, i-potassium, i-sodium, isinyithi kunye nezinye izimbiwa. Iinqwelo ziqukethe i-amino acids tryptophan kunye ne-lysine, ebalulekileyo kumzimba womntu, iioli eziyimfuneko, i-pantothenic ne-nicotinic acids.
I-Fiber, equkethwe kule ngqolowa, inceda ukuhlambulula umzimba weesxibisi kunye neesxinyi, ivuselela intlungu yamathumbu, ayiyihluthisi ibhaktheriya emathunjini amakhulu, ayifaki iikhalori ezingaphezulu. Ukusetyenziswa rhoqo kweeats kunomphumo onenzuzo kwi-cardiovascular, digestive, ne-nervous systems. Kananjalo le cereal iphucula i-pancreas, isibindi, i-thyroid gland kunye nezinye izixhobo zomzimba.
Isitashi, esiqulethwe kwi-oatmeal, sigcwalisa umzimba ngamandla ngokuthe ngcembe, oku kunceda ukuphepha ukuphaphazela ngokukhawuleza kwishukela yegazi, nto ibaluleke kakhulu kwi-diabetes. Iprotheni, eyingxenye yale cereal, iyafana neprotein ye-muscle, eyenza ibaluleke kakhulu kwaye inokubaluleka. Ngokusetyenziswa rhoqo, ii-oats zibe nempembelelo emangalisayo kwimeko yeenwele, izipikili kunye namathambo. I-mucous oat broth inceda ngeengxaki ezahlukeneyo zesisu. Kwakhona, ii-oats zihlala zicetyiswa ngabazondlo ukugcina nokulungisa isisindo.
Ummbila awunomsoco kwaye unomhlwa, kodwa umveliso onempilo. Izityalo zeMbewu ziqulethe izinto ezifunekayo kumzimba womzimba: i-calcium, i-potassium, i-magnesium, i-phosphorus, isinyithi, kunye namavithamini E, i-PP, B, i-ascorbic acid, i-acidic acid acids kunye nezinye izinto ezincedo ezenza umbona ube yimveliso ebalulekileyo. Iprotheni yommbila iqukethe i-amino acids tryptophan kunye ne-lysine. Ummbila unempembelelo yokuhlanjululwa: uyasusa i-tox, i-slags, i-radionuclides, i-accumulated fat, kwaye iphinda ikhusele i-cardiac, i-oncological nezinye izifo. Umngconywayo unconywa ukuba utyweke, isifo sikashukela, ukukhuluphala, kunye neengxaki zesiginci sesisu. Le ngqolowa iyakwazi ukulawula imetabolism, imise umgangatho we-cholesterol. Ii-carbohydrate eziqulethwe ngqolowa, ziqhelise iswekile yegazi, zondla izihlunu, kunye neeseli zesigulane, zenza ingqolowa ibe luncedo kwizifo zesistim se-nervous system. Ummbila unempembelelo ekujikelezeni kwegazi, unciphisa ukuguga komzimba, ukwandisa ukunyaniseka kwemithambo yegazi, kuqinisa amazinyo, iinwele kunye nezipikili.
Iishukela eziqule ngqolowa, kunye ne-calcium kunye ne-potassium, zinika ingqolowa kwisenzo se-diuretic, sincede ngamatye eentso, ngezifo ezithathelwanayo nezivuzayo zesibindi. Kwakhona, ummbila unempahla ye-choleretic, i-normalizes metabolism. I-Stigmas yengqolowa nayo igumbi lokugcina impahla eneempawu ezinobuncedo, apho kukho izidakamizwa eziveliswayo. I-Stigmas, njengengqolowa, ukuphucula ukuphuma kwe-bile, ibe nomthelela wesifo, ukunciphisa iswekile yegazi, kwaye nayo ibe nempembelelo ye-hemostatic, ngoko kuya kuba luncedo, umzekelo, kubasetyhini abanexesheni. Ukusuka kwi-stigmas yenza i-decoction: 3 tbsp. Iipuni zezinto eziqulathekileyo kufuneka uchithe 200 ml wamanzi abilayo kwaye uvumele ukupholisa.
I-Millet yenye yezona nkcubeko zamandulo. Emva kokuba esi sityalo sabizwa ngokuthi "i-croquet yegolide", nangona umbala we-millet awudingi ukuba luphuzi. Umbala wayo unokuhluka ukusuka kumhlophe ukuya kufutshane. Enye yeenzuzo eziphambili zale ngqolowa kukuba iqulethe inani elikhulu leeprotheni, ezi "izinto zokwakha" zomzimba, ngakumbi ukukhula. Ukongeza, i-millet iphezulu kunezinye izityalo kwi-protein content, kubandakanywa ilayisi kunye ne-buckwheat. Esi sityalo sityalo sisinye sezona zincinci ze-allergenic, zilula ngokulula, kwaye ke zifanelekile kubantu abaneengxaki zokugaya ukutya.
I-porti ye-Millet yindawo yokugcina iivithamini, i-amino acid kunye neemaminerali. Kwi-foam iqukethe inani elikhulu lama-vithamini eqela, elinomphumo onenzuzo kwimeko yezipikili, isikhumba, iinwele. Kwakhona, ezi iivithamini zilawula uxinzelelo lwegazi, zinciphise ukucaphukisa, ukwandisa ukusebenza kakuhle, ukuxhatshazwa kokulwa, zinomphumo onobuncedo kwingqondo jikelele yomntu kunye nomoya wakhe (ingakumbi i-folic acid - i-vitamin B9). Iivithamini zeqela B nazo zithathe inxaxheba kwi-normalization ye-carbohydrate kunye ne-fatabetism ye-fat emzimbeni.
Intsimbi, equkethwe kwipineyini, inegalelo eluncedo kwinkqubo ye-hematopoietic, inciphisa umngcipheko we-anemia, kuphucula ukujikeleza kwegazi. Ukuba udla i-porridge ye-millet, iiselom zegazi ezibomvu ziya kuphuculwa ngcono. I-Potassium ifumaneka kwixabiso elikhulu kwipenny, ilawula kwaye iphucule indlela yokusebenza kwenkqubo ye-cardiovascular system, inomphumo onenzuzo entliziyweni yentliziyo. I-Manganese imisa ngokuqhelekileyo imetabolism. I-Magnesium ikwandisa ukunyamezela komzimba. I-fluoride kunye ne-silicon ixhasa impilo yamathambo, izipikili kunye namazinyo. I-Copper ibambezela ukuguga, isusa isikhumba kunye nokubonakala kwemibimbi, isekela ukunyaniseka kwesikhumba. Kwipineyini kukho ininzi ye-phosphorus, eyomeleza amazinyo namathambo, ikhuthaza i-bone fusion kwiziqhekeza, ukuphulukiswa kwisilonda, ukuhlanjululwa kwesikhumba. Ukongeza, i-millet iqukethe iodine, i-sodium, i-zinc, i-bromine, i-calcium, i-chromium, i-fibre kunye nezinye izinto ezifunekayo kubantu. Kwakhona ku-пшене ubuninzi be-starch, i-vitamin РР, beta-carotene.
I-Millet porridge igalelo ekukhutsheni i-toxins kunye ne-toxins evela emzimbeni, inqanda ukuthunyelwa kwamafutha kunye nokubonakala kwe-cholesterol plaques. Kwakhona, i-millet inceda umzimba ukuba ususe ama-antibiotiki kwaye usebenzise umgangatho oqinisayo kumzimba wonke. I-Millet porridge inefuthe elihle kumzimba kwizifo ezininzi, kuquka nesifo sesibindi, isifo sikashukela, i-atherosclerosis nezifo ze-pancreatic. Unokuchitha i-20-day course yokutakula kwezifo eziphazamisayo: kufuneka udle iplate ye-millet ipharityhulam yonke imihla. Kulabo bafuna ukunciphisa ubunzima, ipilgi ye-millet ngumncedisi omkhulu. Njengoko sele kukhankanyiwe, i-millet ivimbela ukuthunyelwa kwamafutha, kwaye inceda kwakhona ukususa emzimbeni, kwaye ngoko ke luncedo kubantu abanomthwalo obunzima.
Ukongeza, i-pshena iqulethe i-amino acids efana ne-leucine kunye ne-histidine, efunekayo ngumzimba womntu, kwaye ngokwawo ayenziwanga.
Kwi-foam iqukethe i-vitamin A ngaphezulu, enceda ukugcina umswakama kwiindawo eziphezulu zesikhumba, okuza kuthi kuvuselele ukubuyiswa kweeseli. Isitya se-millet ipilishi yokutya kwasekuseni ngumrhumo wamandla malunga nomhla. I-Millet inefuthe ledayuretic, kwaye ngoko unceda ukulahla ukukhukhumeza, kucetyiswa ukuba isebenzise i-millet kwaye inqande le ngxaki. I-Millet inokukunceda kunyango lweqanda eliqhelekileyo kunye ne-sinusitis. Ukwenza oku, iphartha ye-millet efudumele ifakwe kwisikhwama yelinen, kwaye le ngxowa iyafakwa kwizono ezinkulu. Kubalulekile ukuyigcina ide ipholile. Le nkqubo kufuneka yenziwe ngamaxesha amaninzi ngosuku.
Ukongezelela, kukho ezinye iindlela ezininzi zokupheka ukunyangwa kwezifo ezahlukahlukeneyo, umzekelo, ukunyangwa kwe-pancreatitis, ukukhutshwa kwi-gallbladder kunye nesibindi, i-conjunctivitis, i-hemorrhoids, i-cystitis, ukulahla nezinye izifo.
I-Millet yindawo ekhethekileyo yokutya, kodwa ukuphikisana kusekhona. I-porridge ipiliti iya kuba ukutya okunzima kwesisu kunye ne-acidity eyancitshisiwe. Musa ukuthwala i-millet porridge kunye nokuqhawulwa, izifo zesistim ejikelezayo kunye nokukhulelwa. Ukusetyenziswa kweemali ezininzi ngamadoda ekutya kunokunciphisa amandla. I-Millet iqulethe izinto eziphazamisa i-thyroid gland ukufumana iodod. Ngokwezinye izazinzulu, unyango olushushu lwe-millet lubonakalisa ezi zinto, ngelixa ezinye ziphika. Ngoko ke, izigulane ezine-hypothyroidism kufuneka ziqaphele ukutya i-millet.
Ngoku makhe sibone indlela yokukhetha i-millet ukwenzela ukupheka i-porridge yamnandi. Into efanelekileyo, efanelekileyo yokutya ukutya ingahlukaniswa nombala obala ophuzi kunye ne-opacity, i.e. ingqolowa kufuneka ibe phantsi. Kuvela kwi-millet enokuthi uza kufumana i-porridge enomsoco kwaye enobuncwane, echithwa kakuhle ngumzimba. Ingqolowa ebuninzi yi-millet dran. Ukuba ubilisa i-porridge kuwo, kuya kuba nekrakra elibuhlungu. I-millet enjalo ilungele kuphela ukutya kwizilwanyana zasekhaya nasezintakeni. Kukho i-millet echanekileyo, efanelekileyo ukulungiswa kwee-cereals kunye nezinye izitya ezibandakanya i-millet. Kufuneka kuqatshelwe ukuba olu hlobo lwe-millet lukhawuleza lulungiswe. Kodwa, njengoko sele sichazwe ngaphambili, ukuba isonka esiphunga kunye nesiphunga esilungileyo sinokulungeleka ngokusanhlamvu okuqingqiweyo okukhanyayo umbala ophuzi. I-Millet ayikwazi ukugcinwa ixesha elide. ukuba iyalala, iya kuba nekrakra elibuhlungu kunye nephunga elimnandi. Oku kungenxa yokuba i-millet iqulethe i-fat, eyenza i-oxidizes ngokukhawuleza kwaye inike umonakalo kwi-rump.
Ukuba i-croup isalahlekile kwaye yaba nomsindo, ngoko unokuzama ukulungisa imeko ngale ndlela ilandelayo. Gcoba i-millet kakuhle kwaye uyibethe ngamanzi abilayo, uze ucole la manzi uze upheke ingqolowa kwenye yamanzi abilayo. Ungazama enye inketho - uthele i-millet kwi-pan yome, yifake emlilweni, uyomise kwaye ushushu.
Ilayisi nayo ikhethekileyo yokukhetha abaxhasi bokutya okunempilo. Iqulethe i-carbohydrate eyinkimbinkimbi, i-fibre, iivithamini kunye neemaminerali ngobuninzi. Ngexesha elifanayo, kufuneka kuqatshelwe ukuba irayisi ephothiweyo engabonakaliyo inezixhobo ezinobuninzi kuneerayisi eziqhelekileyo. Njengoko sele kukhankanywe, irayisi iyimvelaphi ye-carbohydrate enzima, ngenxa yokuba umzimba ufumana ukungena kwamandla okufanayo, i-sugar level iphakamileyo, isantya se-fat fat daily decases.
Ilayiti iqulethe iiprotheyini, ezibalulekileyo i-amino acids, i-lecithin, i-fibre, ii-vithamini E, i-B1, i-B2, i-B3, i-B6, kunye ne-potassium, i-phosphorus, i-iron, i-iodine, i-calcium, i-zinc, i-selenium. Ngokuqhelekileyo ayinalo ityuwa, ngoko ke irayisi iyacetyiswa kubantu abaneentso kunye nezifo zentliziyo. Ukongezelela, i-potassium equlethwe ilayisi ininzi kakhulu ayinakuchukumisa umonakalo weetyuwa, oza kunye nezinye ukutya. Kwakhona kunomphumo onenzuzo kumalungu.
Ukusetyenziswa rhoqo kwelayisi kunciphisa umngcipheko womhlaza, unempembelelo enomdla kwindlela yesisu, inefuthe elihle kwizilonda kunye ne-gastritis, ukwanda kwe-asidi, ukukhupha kunye nokukhusela umlenze womzimba. Le mifuno ayiqukethe i-gluten, ngamanye amaxesha inokusebenza njenge-allergen, ngoko ke irayisi inomsebenzi kwaye iyancipha.
Ku luncedo ukutya irayisi ukuya kumlinganiselo wabantu abazama ukubeka ubunzima okanye nokuba banciphise ubunzima, kuba irayisi ayifuni ukukhusela isisu, kwaye kwakhona iqulethe ityuwa encinane.
I-Lecithin ivuselela umsebenzi wengqondo, i-gamma-aminobutyric acid igxininisa ingcinezelo.
Ilayisi isityalo esiluncedo kakhulu, nangona kunjalo, uninzi lwezixhobo zalo ezincedo zikwindawo engaphandle, kwi-shell, i-i. Kungcono ukusebenzisa ilayisi engaxilwanga, njengoko sele ikhankanywe. Ilayisi ihlelwe ngokwemilo yobungqolowa: i-rice ihlulwe iindidi eziliqela: umhlophe (umhlabathi kunye nomhlaba ngokulahlekelwa okukodwa kwezinto ezincedo), obomvu (ilayisi engaphilile, enekhanda lemibala ebomvu), omnyama (asendle, omhlophe iinkozo, ezihlanganiswe ngamanqatha omnyama), emdaka (uye, ngokulandelanayo, i-brown light brown). Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeArborio (i-Italiyali ehlukeneyo yerayisi eninzi yengqolowa, ithathwa njengelinye lezona zihlobo ezintle), i-Basmati, iJasmine (iintlobo zeerayisi ezininzi ezivuthiweyo), i-Kamolino (iindidi zaseYiputa ezijikelezileyo, i-pearl color) kunye nabanye.
Ungabona kwakhona irayisi eluhlaza, emdaka, imibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu, buphucukileyo kwaye bukhululekile. Ilayisi egalelwe ihlanjululwa yi-bran kunye nazo zonke iigobols, ziya kuba zihamba kakuhle kwaye zibushelele, ikhephu-ezimhlophe kunye ne-translucent. Kodwa ngoko utshani buba luncedo kakhulu kwaye buncinci. Abakhiqizi abaziwayo bazama ukusebenzisa ubuchwepheshe bokugaya ukugaya ukuze balondoloze ubunzima bamavithamini kwilayisi kangangoko kunokwenzeka.
Ukufingqa, kufuneka kuthathelwe ukuba ukutya okutyayo kuyimfuneko kulabo bahambelana nokutya okunempilo. Ngoku uyazi yonke into malunga nezinto ezinobuncwane zityalo: i-hare, i-oats, i-corn, i-millet, ilayisi, i-buckwheat. Yimpilo!
Eyona nto ibalulekileyo yeemveliso ezingathathi hlangothi yilezi zilimo
Ukubunjwa kunye nokulimala kweesobho ezizenzekelayo
Ukutya okubelethayo kunye nokubulala umnqweno
Ukukhulula imini kwi-cottage cheese
Iipropathi zokuphilisa i-willow ye-tea: isicelo, zokupheka, ukuchaswa
Imozulu eCrimea ngoJuni 2016: yintoni enokuyilindela ukususela ekuqaleni kwehlobo?
Indlela yokukhangela impumelelo nokufezekisa okufunwayo
Iimfihlelo ze-holide yokwenza
Ukucoceka ubuso ngobuso
Kutheni umntu eyika ukuhlangana?
Irayisi edikiweyo kunye neentlanzi zaselwandle kwisitayela saseThai
Inkqubo yokuqeqeshwa koqeqesho lwekhaya
Amabhafu ancedo - impembelelo yokwelapha
Penne pasta nge sipinashi
Ukubethelwa kwizinja: kuthini ukuba uthetha ntoni na
Indlela yokuba yintombazana engcono kakhulu kwintombi yakho
Ikhalenda yezinwele zemihla ngemihla: ngoJanuwari 2014
Imifuno: izakhiwo ezixhamlayo zemifuno